၎င်းတို့အားလုံးသည်12ပြီ ၁၂ ရက်တွင်လင်ကွန်း၌ဖွင့်လှစ်သည့်ဘီယာဥယျာဉ်များနှင့်ပြင်ပအရက်ဆိုင်များဖြစ်သည် - သတင်း
၎င်းတို့အားလုံးသည်12ပြီ ၁၂ ရက်တွင်လင်ကွန်း၌ဖွင့်လှစ်သည့်ဘီယာဥယျာဉ်များနှင့်ပြင်ပအရက်ဆိုင်များဖြစ်သည်
ဒီနှင့်အတူ, ပြီလ ၁၂ ရက် တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်သင်၏အိမ်တွင်းတွင်အားကစားရုံများပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်ဆောင်ပုဒ်များကိုလည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ under အောက်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းထားသောဆံပင်ပုံစံနှင့်တက်တူးများကိုလည်းခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆိုင်များအားလုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အတွက်နောက်ဆုံးတွင်ဆေးကြော။ ပျောက်နေသည့်ခြေအိတ်များကိုသင်နောက်ဆုံး၌အစားထိုးနိုင်သည်။
အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များကplansပြီ ၁၂ ရက်အတွက်သူတို့၏အစီအစဉ်များကိုကြေငြာလာသည်နှင့်အမျှဤစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်၍ တင်ပြပါမည်။
Aprilပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဆင်းသက်လာသည့်အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်အရက်ဆိုင်များ
လင်ကွန်း SU ရဲ့ The Swan သူတို့တစ်တွေအတွက်Aprilပြီလ 12 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည် လူမှုမီဒီယာ post ။
ဘယ်လို stalker ဖမ်းမိခဲ့သည်
Swan က“ မင်းကိုငါတို့အရမ်းလွမ်းခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်Aprilပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီးသင့်အားပြန်လည်ကြိုဆိုရန်မစောင့်နိုင်ပါ။ အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီခြောက်နေရာရှိအုပ်စုများအတွက်ထိုင်ခုံတစ်ခုတည်းကိုသာတင်းကြပ်စွာထားရှိရမည်။
အရက်ဆိုင်ကိုနံနက် ၁၁ နာရီမှည ၁၁ နာရီခွဲအထိဖွင့်လှစ်။ တစ်နေ့လုံးအပူနှင့်အအေးအချိုရည်ကိုသောက်သုံးနိုင်သည် Swan အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမရှိပါ၊ ငွေပေးချေခြင်းကို Student Orders အက်ပ်မှတဆင့်သာပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Lincoln SU ၏နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်မျှော်စင်အသစ်များသည်12ပြီ ၁၂ ရက်တွင်သူတို့၏အပြင်ဘက်areaရိယာကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်မျှော်စင်များသည်အပြင်ဘက်enhanceရိယာကိုမြှင့်တင်ရန်အော့နာများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပေးစက်များ၊ အပြင်ဘက်တီဗီနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်ပလတ်စတစ်ထိုင်ခုံများဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကဒီ Lincoln Tab ကိုသူတို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာကျောင်းသားတွေဖြစ်နိုင်သမျှသူတို့ရဲ့ SU နေရာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်အောင် COVID-19 တင်ပြထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အပြင်ဘက်areaရိယာကိုတိုးချဲ့ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။
The Swan ကဲ့သို့ပင်ထိုင်ခုံများသည်အစိုးရလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီခြောက်လအုပ်စုများအတွက်သာလျှင်ပြင်ပတွင်ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့၏ဖွင့်လှစ်ချိန်သည်နံနက် ၁၀ နာရီမှညသန်းခေါင်အထိဖြစ်သည်။
ငါတို့အားလုံးသိပြီးချစ်ကြသောဘားတစ်ခုသည် Trebles ကtheyပြီ ၁၂ ရက်တွင်သူတို့၏အပူပေးပြီးအပြည့်အဝဖုံးအုပ်ထားသောဘီယာဥယျာဉ်နှင့်အတူပြန်လာလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
တနင်္လာနေ့မှကြာသပတေးနေ့မှ ၆ နာရီအထိ၊ သောကြာနေ့ ၄ ညနေနှောင်းပိုင်းအထိစနေနေ့ ၃ ညနေနှောင်းပိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၄ နာရီအထိဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလာမည့်အပတ်များတွင်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ instagram တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်လျှင်သူကအခြားလူတဦးအဘို့ကိုဖျက်ပစ်ပါဘူး
သူတို့ကပေါင် ၄.၂၀ ကနေ ၀ င်ငွေအများအပြားနဲ့ Vimto၊ Irn Bru၊
အနောက်အရက်ဆိုင်အတွက် West End ရဲ့ဘုရင်မAprilပြီလ 12 ရက်နေ့တွင်သူတို့ရဲ့အရက်ဆိုင်ဥယျာဉ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အပေါ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သူတို့က“ ငါတို့ဘီယာဥယျာဉ်အတွက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားတယ်၊ စားပွဲတစ်ခုစီမှာအများဆုံးခြောက်ယောက်ရှိတယ်။ ယခုသူတို့သည်Aprilပြီလ ၁၂ ရက်တွင်နောက်ထပ်မရှိတော့ပါ၊ သို့သော်နောက်တစ်နေ့တွင်စာအုပ်ဝယ်ရန်လူများကိုစာပို့ခိုင်းပါ။
5. ပက်ကျိ & ဆလတ်
လင်ကွန်းရဲ့ပက်ကျိနှင့်ဆလတ်သူတို့Aprilပြီလ 12 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ တစ် ဦး အပေါ် Facebook post သူတို့က 'ချောင်းမြောင်းလုနီးပြီ! ကော့တေးနှင့်နေရောင်ခြည်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပါ။ ကျနော်တို့outdoorပြီလကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ပareaရိယာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ကြသည်! @ ဂိုဏ်းထဲမှာနှင့်သင်၏ S & L ရက်စွဲများယခုစာအုပ်ဆိုင်။
တစ် ဦး အတွက် လူမှုမီဒီယာ post , Craft said: ထိုအပဲငါတို့ပြန်ကလေးပါပဲ! ကျွန်ုပ်တို့၏ alfresco bar အတွေ့အကြုံအတွက်Aprilပြီ ၁၂ ရက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တံခါးများကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ဂီတ၊ စားပွဲထိုးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမှတ်တရများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်ထောင်ချောက်ဘီယာဥယျာဉ်၌သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကော့တေးလ်သည်မည်သည့်အရသာရှိသည်ကိုသတိရပါ။
သငျသညျ Craft များအတွက်သင်၏ဘွတ်ကင်ထားနိုင်ပါတယ်, ဒီမှာ ။
နောက်ထပ် Lincoln SU နေရာကိုAprilပြီလတွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစိုးရ၏ကြေငြာချက်အပြီးတွင်သောကြာနေ့ 16 Aprilပြီ 16 ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကြေငြာချက်တစ်ခုတွင်သူတို့က“ မင်းကိုသင်္ဘောပေါ်ပြန်လာဖို့အချိန်နီးပြီ။ သင်အကြိုက်ဆုံးကော့တေး၊ ဘီယာဘူး၊ အထူးရွေးချယ်ထားသောဝိုင်များ၊ အချိုရည်များနှင့်လတ်ဆတ်သောပီဇာများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါမည်။
ထိုအချိန်မှ စ၍ သောကြာနေ့များမှသောကြာနေ့များဖြစ်သောညနေ ၅း၁၁ နာရီနှင့်စနေနေ့များ ၁ နာရီမှ ၁၂ နာရီဖွင့်လှစ်သည်။
The Swan and Towers ကဲ့သို့ပင်ထိုင်ခုံသည်ခြောက်အုပ်စုမှအုပ်စုများအတွက်သာလျှင်တင်းကျပ်စွာအပြင်တွင်ရှိပြီးစာအုပ်များလည်းမရှိ၊ ပြင်ပထိုင်ခုံများကိုလည်းပထမ ဦး ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
• အဝတ်အချည်းစည်းဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ငှားရမ်းခလျှော့ချခြင်းနှင့်သော့ခတ်ခြင်းများရပ်တန့်ခြင်း - လင်ကွန်းရှိ Covid-19 နှစ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း
•လင်ကွန်းကျောင်းသား Uni ၏နောက်ဆုံးရေပုံးစာရင်း
•ရလာဒ်များမှာ - လင်ကွန်း၏ SU ရွေးကောက်ပွဲများမှရရှိသောသူအားလုံးနှင့်တွေ့ဆုံရန်